पाँचौं महिनाको लागि black कालो शीर्षक। पहाडी, मानजिनी, मोला, सिल्भा र हान्सन | वर्तमान साहित्य
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | किताबहरु, नोभेला, कालो उपन्यास
सुरु हुन्छ Swimsuit, बर्षको पाँचौं महिना, र नयाँ मध्ये पिचहरू म यी tit शीर्षकहरू हाइलाइट गर्दछु। तिनीहरू स्पेनी लेखकहरू द्वारा हुन् टोनी हिल, कार्मेन मोला र लोरेन्जो सिल्भा, अमेरिकी पीटर स्वानसन र इटालियन एन्टोनियो मानजिनी। को नयाँ शीर्षक गाढा टोन चिसो शुरु हुने महिनाको लागि। उनीहरूले हामीलाई विधाका प्रेमीहरू के भन्छन् नयाँ कथाहरू हेर्नुहोस्।
1 जिप्सी दुलही - कार्मेन मोला
2 गिलास टाइगरहरू - टोनी हिल
3 --7-२००7 - एन्टोनियो मानजिनी
4 मनदेखि टाढा - लोरेन्जो सिल्भा
5 एक योग्य मृत्यु - पीटर स्वानसन
जिप्सी दुलही - कार्मेन मोला
यो मे १ on मा प्रकाशित भयो।
को जासूस उपन्यास बढी विद्रोही वर्तमान स्पेनिश साहित्य को। कार्मेन मोला, जसको पहिचान अझै अज्ञात छ, छिमेकीमा हुने यस धेरै काली कथाले चकित पार्न चाहन्छ कारबान्चेल महिलाको हराएको र मृत्युको बारेमा म्याड्रिडमा।
सुसाना मकाया उनीकी छोरी हुन् जिप्सी बुबा तर उनी हुर्केकी छिन् पयाया र त्यसपछि उनको स्नातक पार्टी गायब हुन्छ। उनीहरूले उनको लास भेट्टाए दुई दिन पछि काराभेनेलमा, जसले क्रूर र असामान्य रीतिथितिद्वारा यातना दिएका छन्। मुख्य कुरा यो हो उनकी दिदी लाराले पनि त्यस्तै दुर्भाग्य भोगे सात वर्ष अगाडि र ऊ पनि बिहे गर्न लागिरहेको थियो। तर जबदेखि लाराको हत्याराले जेल सजाय पाउँदै आएको छ, त्यसकारण त्यहाँ दुई मात्र सम्भाव्यताहरू छन्: वा कसैले तिनीहरूको विधि अनुकरण गरेको छ वा जेलमा निर्दोष छ.
युवा डिप्टी इन्स्पेक्टरले केसलाई सम्हाल्नेछ परी जराटे र निरीक्षक एलेना ब्लान्को, केस एनालिसिस ब्रिगेडका प्रमुख, एक विभागले अत्यन्त जटिल र जघन्य अपराधहरू समाधान गर्नको लागि विशेष रूपमा सिर्जना गरेको हो।
तर दुबै भन्दा माथिल्लो, आयुक्त घर मालिक, Zárate लाई केसबाट हटाउने र यसलाई सुम्पने निर्णय गरेको छ सेतो, केही अजीब र एकाकी महिला, को प्रेमी grappa, र कराओके मनपर्ने, कलेक्टरको कार र SUV सेक्स। त्यसो भए इन्स्पेक्टर ब्लान्कोले गर्नु पर्छ केहि जिप्सीको जीवनमा प्रवेश गर्नुहोस् जसले आविष्कार गर्न एकीकृत गर्न आफ्नो प्रथा छोडे कसले यति नराम्ररी मार्न सक्छ दुई जिप्सी प्रेमिकालाई।
गिलास बाघ - टोनी हिल
टोनी हिलले यस नयाँ उपन्यास लाई बाहिरबाट ल्याउँछ मनोवैज्ञानिक सस्पेंस र रहस्यले पूर्ण जुन दुई चरणहरूमा सर्दछ। हामी काल्पनिक छिमेकमा जाँदै छौं बार्सिलोना रेड बेल्ट दौरा समयमा सत्तरी र आज। सत्तरीको दशकको अन्ततिर भेक्टर यागी र जुआन्पे जमोरा तिनीहरू सहपाठीहरू भन्दा बढी थिए। तिनीहरूले कन्फेडेन्स र खेलहरू, खुशी र डर साझा गरे, र उनीहरूको मित्रता समयको रूपमा र वरपरका समस्याग्रस्त सडकहरूमा फैलियो। दिन सम्म एक दुखद घटना तिनीहरूलाई वफादारी र मुक्ति बीच छनौट गर्न बाध्य।
तिनीहरू फेरि भेला हुन्छन् सतालीस वर्ष पछि उही दृश्य मा। तिनीहरूको जीवन विपरित मार्गहरुमा लाग्यो किनकि जुआनपे एक मान्छे व्यस्त र भेक्टर, अर्कोतर्फ, एक विजेता। सायद यसैले उसले आफ्नो साथीप्रति indeणी महसुस गर्छ र बन्द केसको छायाँ सामना गर्ने निर्णय गर्छ जुन जारी छ अनुत्तरित प्रश्नहरू र त्यो जटिल हुन सक्छ।
7-7-2007 - एन्टोनियो मानजिनी
इटालियन एन्टोनियो मानजिनी उसको सबैभन्दा प्रिय र प्रख्यात चरित्र, विडम्बनापूर्ण र खट्टा अण्डरबासको नयाँ कथाको साथ फर्काउँछ रोक्को सिचियावोन। यस पटक हामी भित्र छौं जुलाई २०० and र रोममा, जसले उष्णकटिबंधीय आँधीबेहरीको पीडा भोग्छ। मेरिना, Schiavone श्रीमती, घर छोडेर छ किनभने उसले पत्ता लगाएको छ रोक्को र उसका साथीहरूको छायादार सम्झौता जीवनभर र सानो अपराधीहरूको, सेबास्टियानो, ब्रिजियो र फुरियो।
यो भup्गको बिचमा हो जब उप प्रमुखले अनुसन्धान गर्नु पर्छ दुई युवकको हत्या बीस बर्ष एउटा हो जियोभन्नी फेरी, एक प्रसिद्ध पत्रकार र अनुकरणीय कानून विद्यार्थीको छोरा, जो शहरको बाहिरी भागमा हिंसाको स्पष्ट संकेतको साथ फेला पर्दछ। र केही दिन पछि उनीहरूको लास भेट्टाउँछन् म्याथ्यु लिभोलसी सडकको बीचमा। उनको टोली र उनको रोमन साथीहरुको सहयोग मा, Schiavone एक uncovering समाप्त हुनेछ लागूऔषध तस्करको अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क, तर यसको लागि तिर्नु पर्ने मूल्य धेरै उच्च हुन सक्छ।
टाढा मुटु बाट - लोरेन्जो सिल्भा
हामी मनाइरहेका छौं श्रृंखलाको २० औं वार्षिकोत्सव राष्ट्रिय साहित्य मा सबैभन्दा प्रसिद्ध सिभिल गार्ड को, बेभिलाक्वा र क्यामेरो। र यो नयाँ शीर्षकमा तिनीहरूले हामीलाई जलसमुद्रमा लगे।
एक जना मानिस हराइसकेका छन् पच्चीस वर्ष पुरानो, कम्प्युटर अपराधको इतिहासको साथमा यस क्षेत्रमा जिब्राल्टर क्षेत्र। त्यहाँ साक्षीहरू छन् जसले दाबी गरे कि मान्छेहरूको एउटा समूहले कसरी सडकको बिचमा उसलाई दोष लगाए र उसलाई कारमा जबरजस्ती गरे। उनको बेपत्ता भएको केही समय पछि नै उसको लागि अनुरोध गरिएको छ ठूलो उद्धार नगद मा कि आफ्नो तिर्न हिचकिचाउँदैन। तर त्यसबेलादेखि उनी फेरि कहिल्‍यै सुनेनन र उनी मारिए भनेर विश्वास गर्न थाले।
दोस्रो लेफ्टिनेन्ट बेभिलाक्वा र सार्जन्ट चामोरोलाई कमिसन गरियो के भयो स्पष्ट पार्नुहोस् तीन दिन पछि बेपत्ता पारिए। त्यसोभए तिनीहरू साम्राज्यमा यात्रा गर्छन् जहाँ उनीहरूले दृश्यहरू पाउँछन् जसमा कानून सापेक्षिक हुन्छ, कालो धन एक साधारण मुद्रा हो र यसको लान्डरिंग, दैनिक आवश्यकता हो। संक्षेप मा, एक दृश्य जहाँ केहि पनि सम्भव छ।
एक योग्य मृत्यु - पिटर स्वानसन
8 मे रिलीज गरियो.
अमेरिकी लेखकको नयाँ उपन्यास भएको छ तुलनामा सस्पेंस को मास्टर को कि पैट्रसिया हाइस्मिथ र अल्फ्रेड हिचकक.
आधार त्यो हो मार्न सजिलो छ र सबैले यो गर्न सक्छन् सबैभन्दा विविध कारणका लागि, जस्तै, उदाहरणका लागि, क्रोधको एक फिट जहाँ पतिले पत्नीलाई मार्छ वा यसको ठीक उल्टो हुन्छ। तर कुरा के हो भने पत्ता लगाउन बिना मार्न वास्तवमै गाह्रो कुरा हो। हामीसँग एक मुख्य पात्र छ, लिली, जसले सोच्छ कि उसले समाधान भेट्टायो। र यो यो हो कि शरीर बिना त्यहाँ कुनै हत्या हुँदैन, एक मरेको मान्छे हराएको व्यक्ति बन्छ।
लिली न त मार्न रुचाउँछिन् न ता उनलाई पश्चाताप छ किनभने त्यहाँ मर्ने योग्य मानिसहरू छन् र त्यहाँ हत्याराहरू छन् जो आफ्नो बाटो पाउन योग्य छन। त्यो को रूप मा सरल। यो टेड हो, पति, मिरन्डा, श्रीमती, र ब्र्याड, प्रेमी, थाहा छैन। पीटर स्वानसनले हामीलाई सोच्न लगाउँछ कि यदि हामी सोच्छौं कि हामी एउटा हत्यारालाई बुझ्न सक्दछौं। र हामीलाई विश्वस्त पार्नु लिली हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कालो उपन्यास » पाँचौं महिनाको लागि black कालो शीर्षक। पहाडी, मानजिनी, मोला, सिल्भा र स्वानसन
भारतको बारेमा सबै भन्दा राम्रो पुस्तकहरू